Shina fitaratra amin'ny sisin'ny kamiao PK9470 Mpanamboatra sy mpamatsy | Tetezana Andrefana
Ny fitaratry ny kamio PK9470 dia kalitao voalohany sy tsara tarehy. Mety ho an'ny andian-dahatsoratra VOLVO FH izy io. Maro ny fitaratra nahazo mari-pahaizana E-mark sy DOT. Ny orinasanay dia manana harena an-tsokosoko sy traikefa amin'ny orinasa matihanina ho an'ny fitaratry ny fitaratry ny fiara fitateram-bahoaka.
Ny fitaratry ny kamio PK9470 dia kalitao voalohany sy tsara tarehy. Mety ho an'ny andian-dahatsoratra VOLVO FH izy io. Maro ny fitaratra nahazo mari-pahaizana E-mark sy DOT. Ny orinasanay dia manana harena an-tsokosoko sy traikefa amin'ny orinasa matihanina ho an'ny fitaratry ny fitaratry ny fiara fitateram-bahoaka. Miaraka amin'ny karazany maro, kalitao tsara, vidiny mirary ary fomba lamaody, ny vokatray dia ampiasaina amin'ny fitaratra miodina amin'ny kamio. Ny vokatray dia eken'ny besinimaro sy atokisan'ny mpampiasa ary afaka mamaly ny filàna ara-toekarena sy sosialy miovaova. Vokatry ny vokatra avo lenta sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa miavaka dia nahazo tambajotram-barotra eran'izao tontolo izao izahay: Azia atsimo atsinanana, Azia afovoany, Eropa, Amerika atsimo ary afrika. hiady hevitra momba ny orinasa sy hiara-hamorona famirapiratana.
FAMPIHARANA Andian-dahatsoratra VOLVO FH
Manaraka: Taratry ny fitaratra ho an'ny kamio PK9583